Vaovao - Miresaha amin'ny orinasa Manitowoc kilasy manerantany ary iaraho miresaka ny amin'ny ho avy!
Ny marainan'ny 3 septambra dia nasaina hitsidika an'i Grace i Andriamatoa Lei Wang, filoha lefitra zon'ny Business Manitowoc Tower Machines Business Mivoatra ary ny filohan'ny Faritra China.
Ny roa tonta dia nanana fifanakalozana lalina sy mafana fo amin'ny famokarana mahia amin'ny fanamboarana mandroso, fitantanana kalitao, fanavaozana ny vokatra ary fampivoarana talenta.
Amin'ny maha mpitarika eo amin'ny indostrian'ny crane eran-tany azy, Andriamatoa Wang dia nanolotra fanolorana amin'ny antsipiriany ny fizotran'ny famokarana manitowoc manitowoc. Telo taona lasa izay, ny indostrian'ny crane tower an'ny sinoa dia mbola teo amin'ny dingana fiakarana ambany. Ao anatin'izany toe-javatra sarotra izany sy eo ambany fiahian'ny marika Sinoa miakatra, dia tsy asa mora ny mitondra marika iraisam-pirenena mamoy fo amin'ny lala-mahitsy.
Ho an'i Manitowoc, ny fanovana tao anatin'ny telo taona lasa dia tsy mora. Andriamatoa Wang, izay mahay mitady fotoana mety amin'ny toe-javatra mifanohitra amin'izany, dia manao ezaka lehibe amin'ny fanitsiana. Miorina amin'ny fotodrafitrasa famokarana manandanja an'i Manitowoc-Zhangjiagang Factory, dia nitarika ny filozofia nahomby nataony tamin'ny lasa izy, anisan'izany ny hetsika mahia izay misy ny mpiasa rehetra, ary ny filan'ny mpanjifa. Ny fanatsarana ny famolavolana ny vokatra an'ny orinasa dia napetraka haingana tao Manitowoc, ary natambatra tamin'ny faritra Azia-Pasifika sy ny tsena sinoa. Nahatratra vokatra miavaka ny telo taona lasa.
Ny fampiharana, mifantoka amin'ny antsipiriany sy ny hetsika avo lenta ho an'ny mpiasa rehetra, dia tsy vitan'ny hoe nandrisika ny angovo tsara nataon'ny mpiasa, fa koa nanetsika ny fandraisana andraikitra sy ny hafanam-po. Ny traikefa kely voangona sy ny fitaratry ny fahendren'ny mpiasa, nanampy fehezan-teny bebe kokoa momba ny fizotry ny famokarana, ny fizotry ny famokarana, ny fitaovana ary ny fitaovana ho an'ny orinasa manan-tsaina sy mandeha ho azy ao Zhangjiagang. Ny hetsika mahia napetraka tao amin'ny ozinina Zhangjiagang tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nahafahan'ny Manitowoc Potain nahazo tombony marina tamin'ny ozinina. Ny fanaraha-maso kalitao, ny fahombiazan'ny famokarana, ny vokatra isaky ny faritra iray ary ny vidin'ny famokarana dia nohatsaraina hatrany.
Manaraka ny toe-tsain'ny mpanao asa tanana amin'ny "maha-izy azy tsara indrindra", dia manohy mianatra avy amin'ny tombom-barotra amin'ireo orinasa manerantany i Grace, ny fanatsarana hatrany, ny fanomezana ny mpanjifa vokatra sy serivisy avo lenta ary mahomby dia lalana mazava hanatsarana an'i Grace. “Ampidiro anaty indostrian'ny ranomasina ny renirano an-jatony, mieritrereta mialoha ka mahazoa ny ho avy.”